Ny Infinix Note 6 dia ofisialy: fakan-tsarimihetsika misy fakan-tsary telo ary pensilihazo X Pen | Androidsis
Ny Infinix Note 6 dia ofisialy: fakan-tsarimihetsika misy fakan-tsary telo ary pensilihazo X Pen
Tsy ny finday avo lenta an'ny Samsung Galaxy Note ihany no mirehareha amin'ny penina misy fampiasa maro. Ny iray hafa koa izay miaraka amin'ny iray dia ny Infinix Note 6, terminal izay efa ofisialy izao ary mampiditra endri-javatra mahazatra sy famaritana midadasika maromaro, toy ny fakan-tsary telo, izay toa ny fitsipika eo amin'ny Android afovoany sy avo.
Lafiny iray lehibe hafa amin'ity fitaovana vaovao ity ny fikirakira azy, izay Mediatek fa tsy Qualcomm. Io dia mahazatra an'ity karazana terminal ity, noho ny tsena tadiaviny sy ny karazana mpanjifa kendreny.
1 Ny rehetra momba ny Infinix Note 6
Ny rehetra momba ny Infinix Note 6
Infinix Fanamarihana 6
Ny Infinix 6 vaovao dia manasongadina a 6.01-inch AMOLED efijery mamokatra vahaolana FullHD + sy endrika fampisehoana 18: 9. Ity dia tsy manana toerana na perforation, mainka fa fakan-tsary azo esorina, noho izany dia ho hitantsika ireo bezela mahazatra izay fitsipika teo aloha. Na izany aza, tsy dia malaza izy ireo, noho izany dia hanohy hanana famolavolana ankehitriny isika.
Ny finday koa dia mampiasa processeur Mediatek, araka ny efa nolazainay. Ny SoC manokana izay misy fanatrehana ao an-kibon'io dia ny Helio P35, ivontoerana valo izay miasa amin'ny fatra matetika 2.3 GHz noho izany cores Cortex-A53. Ity chipset ity dia miaraka amina RAM 4 GB sy habaka fitehirizana anatiny 64 GB, ary ampiasan'ny bateria 4,000 mAh miaraka amin'ny fanohanan'ny fandefasana haingana XCharge.
Ny fakantsary telo izay ampiasainy dia misy 16 MP (main), 8 MP (solomaso zoro malalaka) ary sensor 2 MP (ho an'ny halaliny). Ny mpitifitra eo anoloana dia fakan-tsary 16 MP miaraka amin'ny 3D Face Beautification ary fiasa mandroso fahaizana artifisialy.
El X Pen stylus Izy io dia misy, izay manasongadina ny Infinix Note 6, dia azo ampiasaina amin'ny fanaovana sary an-tsary sy ny valopy. Izy io koa dia azo ampiasaina handrefesana zavatra tena izy amin'ny alàlan'ny asan'ny fandrefesana AR satria ampiasain'ny AI. Ny headset dia manana efitrano ho an'ny X Pen stylus eo ambany.
LG Stylo 5: Fampidirana vaovao vaovao amin'ny marika
Famaritana teknika hafa, mifantoka amin'ny fifandraisana, misy ny fanohanana ny tambajotra 4G LTE, slot SIM roa, Wi-Fi, Bluetooth (tsy voafaritra ny kinova), port micro-USB, a Jack finday 3.5mm ary A-GPS misy GLONASS.
Natomboka tamin'ny tsena afrikanina ilay fitaovana. Toa tsy misy mariky ny fivarotana azy any Eropa na faritra hafa, saingy mety ho izany no hatao any aoriana. Na izany aza, misy foana ny mety hanafarana azy.
Ny vidiny amidy dia mitovy amin'ny 200 dolara na 170 euro eo amin'ny fifanakalozana ary atolotra amin'ny safidy loko Midnight Black, Mocha Brown ary Aqua Blue.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ny Infinix Note 6 dia ofisialy: fakan-tsarimihetsika misy fakan-tsary telo ary pensilihazo X Pen
EMUI 10 dia efa manana daty fametrahana
Ny famaritana ny Samsung Galaxy A50 dia voatanisa ao amin'ny Geekbench sy AnTuTu